Langue (Mg) – Page 18 – Malag@sy Miray
You are here: Home » Langue » Langue (Mg) ( » Page 18)
Avylavitra 2 novembre 2007 Ny olombelona toy ny voatr’ampangoro….2007-11-08T00:31:31+00:00 Langue (Mg) 16 Comments
Tsy fantatro na efa mba henonareo izy io na tsia, fa toy izao izy amin’ny endriny feno: Ny olombelona toy ny voatr’ampangoro, mbetika ambony, mbetika ambany. Raha hazavaina tsotra...
Dotmg 19 mars 2007 Ho avy aho.2007-03-19T12:06:36+00:00 Langue (Mg) 6 Comments
Malala ô, Ny zanatsika roa, ampatorio aloha, fa te-hahita an-dria aho. Ny entana sy trano Diovy, sasao rano fa te-hahita an-dria aho. Ny rano omano am-patana hifampandroana vatana fa...
Su 4 mars 2007 Ny via na viagn2007-03-09T00:28:21+00:00 Culture 6 Comments
Miala tsiny aho aloha fa ho entiko any amoron-tsiraka atsinanana indray ianareo. Sao mantsy misy hilaza indray any ho any hoe, angaha dia ao amorontsiraka atsinanana ao ihany no...
Dotmg 8 février 2007 bandy iray, sipa iray, tantara iray, …2007-02-19T06:44:18+00:00 Culture 21 Comments
Malomaloka mahangômangôma ny andro, ilay mahakamokamo tsy maha-te hiasa iny. Vao avy bedin’ny mpampiasa ireto mpiasa roalahy fa tsy mahafa-po loatra hono ny fandehan’ny asany ary norahonany fa tsy...
Hery 28 novembre 2006 Izay tsy miady olom-bodo2006-11-28T22:12:45+00:00 Actualités 3 Comments
Ohabolana malagasy ny hoe « Izay tsy miady, olom-bodo fa ny to fo mamosavy ». Fa mbola fomba fitenenana malagasy koa ny hoe « Manao vazaha mody miady ». Ilay voalohany milaza hoe...